Manamarika Ny Fanombohan’ny Aretin’andoha Rehefa Lohataona Ny Fahatongavan’ny Vovoka Mavo Ho An’i Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2015 3:02 GMT
Setroka PM2.5 ateraky ny vovoka mavo ao Oi, Fukui (sarintany) tamin'ny Febroary 2014. Sary avy amin'i Shohei Guccio.
Miaina ny androny voalohany isian'ny “vovoka mavo” amin'ity fizaràn-taona ity ny tanàna Japoney Fukuoka, any atsino andrefana, volana telo mialoha raha oharina amin'ny taloha. Ity koa no voalohany tao anatin'ny dimy taona namoahan'ny Korea Atsimo fanairana momba ny vovoka mavo alohabe tamin'ny fiandohan'ny lohataona.
Vovoka mavo, na kosa (黄砂), dia fambara mialoha ny fahatongavan'ny lohataona ho an'ny olona ao Azia atsinanana. Rivotra mahery avy any andrefana no manainga ny fasika, ny rivotra ary ny antsanga avy any amin'ny faritra maina ao amin'ny tanibe Aziatika, isan'izany ny ao amin'ny tany hay Gobi any Mongolia sy ny lemaka Loess ao Shina.
Taterin'ny rivotra mitety an'i Azia avaratra atsinanana ny vovoka, hankany amin'ny saikinosy Koreana, Japana, ary hatrany amin'ny farany atsinanana ao Rosia.
Ny fahitalavitra ANN no mitatitra ny fiandohan'ny fahatongavan'ilay vovoka tao Fukuoka, ary ny fomba nanakonan'ilay vovoka ny lanitra manga madio amin'ny fizaràn-taona tahaka izao:
Ao Japana, hatrizay ny vovoka mavo dia manambara ny fahatongavany amin'ny alàlan'ny famelàna ireo fiara, varavarankely sy ny lamba nahahy ho rakotra vovoka kely hita maso. Ity rivotra sy vovoka mitsoka ity koa dia mamorona zavona mangamanga na mavomavo izay manafina ny masoandro.
Rivotra manamaloka ny Ranomasina Mavo sy ny Ranomasin'i Japana tamin'ny Martsa 20D1. Sary nomen'ny tetikasa SeaWiFS, NASA/Goddard Space Flight Center, ary ny ORBIMAGE
Azo heverina ho efa namely sahady ireo tanàna sasany ao Japana tany ampiandohan'ity volana ity ilay vovoka mavo. Ity mpampiasa Twitter ity dia mitatitra fisian-javatra madity tamin'ny fiarany (na dia mety ho avy amin'ny vovobonin'ny cryptomeria aza ireo vovoka, zavatra iray manapoizina rehefa miandoha ny lohataona ao Japana):
Tonga ny vovoka mavo! Fotoana izao ho amin'ny fiatrehana ny PM 2.5 sy ny vovobony! (tany Hiroshima any ho any)
Na dia any amin'ny farany atsinanana aza, olona iray nandeha fiarandalamby tao Hankyu tany akaikin'i Osaka no nahamarika koa ny fahatongavan'ilay vovoka mamely ny tanibe:
Agh! Tsy maintsy ny vovoka mavo ity!
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny vovoka mavo ihany koa no antony niteraka ny fiakarana be hita amin'ny isan'ireo marary taovam-pisefoana ao Japana rehefa lohataona.
Ny tafiotra, heverina ho zavatra voajanahary, ankehitriny no heverina ho ny ratsy indrindra amin'ny fahatetehany sy ny hamafisany nateraky ny fikatsahana izay hahabetsaka ny vokatra, ny tevy ala, ny fanimbàna ny tany ary ny firosoan'ny tany hay ao Azia Afovoany sy ny ampahan'ny ao Shina.
Araka ny fantatra dia ireo piti-javatra faran'izay madinika avy aminìny antsanga no manao ny asan'ireny fanafody fitsifotra ireny ka manangona ireo fandoto indostrialy ao amin'ny faritra faran'izay tena be indostria any avaratra atsinanan'i Shina.
Rivotra ratsy kalitao sy rahona feno “setroka PM 2.5″ no vokany manerana an'i Azia avaratra atsinanana. Kely dia kely tsy hitan'ny maso ireo poti-javatra amin'ny PM 2.5 ary amin'ny ankapobeny dia teraka avy amin'ny loto indostrialy. Ny kasinga madinika kely ao amin'ny PM 2.5 no heverina ho miteraka loza ho an'ny fahasalamàn'ny olombelona satria ireny kasinga madinika ireny dia afaka fohana mora foana ary dia miraikitra any amin'ny taovam-pisefoana.
Toy ity ny fisehon'ny hakitroky ny PM 2.5 any avaratra atsinanan'i Azia ny 23 Febroary 2015 teo:
Loharano: Fahalotoan'ny rivotra ao Azia -Sarintany Manondro Ny Kalitaon'ny Rivotra Azo Eo Eo Noho Eo (23 Febroary 2015)
Ny fomba entina mamantatra ny fahalotoana sy ny loko eo amin'ny sarintany eto ambony dia manaraka ny fomba fandrefin'ny EPA, araka ny nofaritan'ny AirNow.
Ireo isa mihoatra ny 100 dia manondro kalitaon-drivotra izay “tsy mahasalàna ho an'ireo vondron'olona marefo.” Ny isa betsaka noho ny 300 dia manondro kalitaon-drivotra izay “mampidi-doza ho an'ny rehetra.”
Ireto sary azon'ny zanabolana ireto, nozaraina tao amin'ny Twitter dia mampiseho ny haben'ny fiakarana tampoky ny vovoka mavo:
Androany (23 Febroary) hita tsara mihitsy ny vovoka mavo… Ny 22 Febroary ny vovoka mavo dia hita tsara teny ambonin'ny Ranomasina Mavo [manakaiky an'i Fukuoka]. Raha oharina amin'ny 22 Febroary, dia tena (tsikaritra tanteraka).